ဒါတွေစားပြီး စာကျက်ရင် စာပိုရတယ်တဲ့ In:Kawi Eats
စာကျက်ရင်း မုန်စားတတ်တဲ့သူလေးတွေ၊ မုန့်ပါမှ စာကျက်တတ်တဲ့လူလေးတွေရော တခြားမုန့်တွေထက် ဒါလေးတွေစားပြီး စာကျက်ရင် စာပိုရမှာတဲ့နော်…
ရိုးရိုးချောကလက်မဟုတ်တာတော့ ဆိုးတယ်။ Dark Chocolate ကနည်းနည်း ခါးတယ်လေနော်။ Dark Chocolate မှာ ပါဝင်မှုနှုန်းအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Cocoa က ဦးနှောက်သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အပြင် အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ယူလေ့လာမှုနှုန်းကို မြင့်တက်စေမှာပါ။
စာလေးဆိုကြည့်လိုက် အစေ့လေးတွေဝါးလိုက် ကွက်တိပဲ။ အစေ့အဆံတွေဖြစ်တဲ့ မြေပဲ၊ သီဟိုစေ့၊ almond တို့မှာ Omega3Fatty Acid နဲ့ Vitamin E ဓာတ်တို့ပါဝင်တာကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။
ကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့ ကာဖင်းဓာတ်က အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း လန်းဆန်းစေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု ကောင်းမွန်စေတာကြောင့် စာကျက်လို့ ပိုကောင်းစေမှာပါ။ ညဘက်တော့ အရမ်းမသောက်နဲ့ ပေါ့နော်။
ညဘက်စာလုပ်တတ်သူတွေအတွက် ကော်ဖီလည်း မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင် ချဉ်ချဉ်လေးဆိုတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပြီးတော့ greek yogurt က ရိုးရိုး yogurt တွေထက် protain ပါဝင်မှုနှုန်းပိုများပါတယ်။ အရမ်းချဉ်တာမကြိုက်ရင်တော့ အသီးလေးတွေနဲ့ တွဲစားပေါ့နော်။
လုပ်ရလွယ်ကူပြီး အမျိုးမျိုးလည်း လုပ်စားလို့ရတာကြောင့် ကြိုက်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကြက်ဥမှာ Vitamin B ပါဝင်တာကြောင့် မှတ်မိလွယ်စေပါတယ်တဲ့။
ဘယ်ရီတွေဖြစ်တဲ့ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ဓာတ်က ဦးနှောက်ဆဲ(လ်)တွေ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကို ချိတ်ဆက်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးတာကြောင့် စာကျက်ရတာပို အဆင်ပြေမှာပါ။ ချဉ်ချဉ်လေးတွေဆိုတော့ အိပ်ချင်လည်းပြေတာပေါ့နော်။
ဒီတစ်ခုကတော့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အသီးအနှံတွေကို လှီးပြီး အသီးအနှံသုပ်ကြီးလုပ်လိုက်တာပါ။ ပန်းသီး၊ နာနတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဖရဲသီး ကြိုက်နှစ်သက်တာ အကုန်လုံးထည့်လို့ရပါတယ်။ အသီးအနှံတွေမှာ Vitamin အမျိုးမျိုးပါတာဆိုတော့ ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ ကြိုက်တတ်တယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ Greek Yogurt နဲ့ ဘယ်ရီလေးတွေလည်း ထည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
ငှက်ပျောသီးစားပြီးရင် အခွံကို လွှတ်ပစ်နေတုန်းပဲလား??? In:Kawi Eats
ကျွန်တော်တို့ စားပြီးတိုင်း လွှင့်ပစ်လိုက်တဲ့ ငှက်ပျောသီးအခွံလေးတွေတောင် အသုံးဝင်တဲ့ နေရာလေးတွေရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ အရေးကြုံလာရင်သုံးလို့ရအောင်နဲ့ မလွှင့်ပစ်ဘဲ သုံးလို့ရမယ့်နေရာလေးတွေကို သိထားရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်… ၁။ ဝက်ခြံတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးမှာပါဝင်တဲ့ vitamin C နဲ့ E အပြင် potassium ဓာတ်တွေက ဝက်ခြံတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးအခွံကို မျက်နှာပေါ်တင်ထားပြီး (၅) မိနစ်ကနေ (၁၀) မိနစ်လောက်တင်ထားပြီး မျက်နှာသစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ တစ်နေ့ကို (၂) ကြိမ်လောက်ထိ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ၂။ ငွေထည်ပစ္စည်းတွေကို သန့်ရှင်းတဲ့ နေရာမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးအခွံမှာပါဝင်တဲ့ potassium ဓာတ်က ငွေထည်တွေကို သန့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ညစ်ပတ်နေတဲ့ ငွေထည်ပစ္စည်းတွေကို ငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့ ပွတ်တိုက်ရုံနဲ့ သန့်ရှင်းသွားစေမှာပါ။ ၃။ Leather ပစ္စည်းတွေကို တောက်ပြောင်စေပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ Leather ပစ္စည်းတွေ ခြောက်သွေ့ပြီး အရောင်မထွက်တော့တာ၊ ဟောင်းနေတဲ့ပုံပေါက်နေတာတို့ဆိုရင် ငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့ ပွတ်တိုက်လိုက်ရင် ပြန်လည်တောက်ပြောင်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄။ သွားတွေကို ဖြူစေပါတယ်။ သွားတိုက်ပြီးတဲ့အခါ ငှက်ပျောသီးအခွံနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးရင် potassium ဓာတ်ကြောင့် ဝါနေတဲ့ သွားတွေကိုဖြူလာစေပါတယ်။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည် စတာတွေကို သောက်လေ့ရှိတဲ့လူတွေ ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ၅။ အပင်စိုက်တဲ့အခါ မြေသြဇာဖြစ်စေတယ်။ ပန်းပင်လေးတွေ၊ သစ်ပင်လေးတွေစိုက်တဲ့အခါ ငှက်ပျောသီးအခွံလေးတွေကို သေးသေးလေးတွေ့ပိုင်းပြီး ထည့်စိုက်မယ်ဆိုရင် သဘာဝမြေသြဖြစ်စေပြီး အပင်ကြီးထွားနှုန်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ၆။ အမာရွတ်တွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးအခွံကို ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ တင်ထားပြီး (၁) နာရီ သို့မဟုတ် တစ်ညလောက်ထားထားလိုက်ရုံနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အမာရွတ်နဲ့ အနီကွက်တွေကို သက်သာစေမှာပါ။ မျက်ကွင်းညိုနေတာတွေအတွက်ပါ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ...
သံပုရာသီးကို ဒီလိုလေးတွေသုံးလို့ရတာ သိရဲ့လား??? In: Kawi Eats
သံပုရာသီးလေးတွေကို ကြီးလေချဉ်လေ အချဉ်သီးလေးတွေဆိုပြီး တစ်မျိုးမထင်ကြပါနဲ့။ သံပုရာသီးက အိမ်တွင်းသမားတော် မဟုတ်တောင် ဒါလေးတွေ သိထားရင် သင့်ကိုကောင်းကောင်း အကူအညီဖြစ်မှာပါ။ လက်အနံ့ပျောက်ဆေး စားချင်တာ စားပြီးမှ crush လေးနဲ့တွေ့ရမှာကို သတိရဖူးးလား?? အဲဒါဆို သံပုရာသီးလေးသာ ပြေးရှာလိုက်နော်။ Crush နဲ့တွေ့မှ မဟုတ်ပါဘူး။ အနံ့ပြင်းပြီး လက်မှာအနံ့စွဲတတ်တဲ့အရာတွေ စားပြီး၊ ကိုင်ပြီးတဲ့အခါ သံပုရာသီးလေးနဲ့ လက်ကိုပွတ်ပြီးမှ ဆပ်ပြာနဲ့ဆေးပါ။ အနံ့စွဲနေတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ အိုးမှာ ဂျိုးတွေကပ်နေရင် ဆပ်ပြာနဲ့တိုက်ဆေးပြီးတာတောင်မှ အိုးမှာဂျိုးလေးတွေကပ်နေသေးတယ်ဆိုရင် သံပုရာသီးကို တစ်ဝက်ပိုင်းပြီး ဆားလေးနဲ့ အိုးကိုပွတ်ပါ။ အက်စစ်ဓာတ်ပါတာကြောင့် ဂျိုးတွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ဂျိုင်းသုတ်မရှိရင် လက်မှာ အနံ့စွဲနေတာတင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျိုင်းနံ့တွေ၊ အနံ့ဆိုးတွေကိုပါ သက်သာစေတာကြောင့် အရေးပေါ် ဂျိုင်းသုတ်အဖြစ်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပလတ်ကျွတ်ရင် အရက်၊ ဘီယာတွေအရမ်းသောက်မိပြီး အရမ်းမူးသွားတဲ့အခါ သံပုရာသီးက အမူးပြေစေပါတယ်။ အရမ်းချဉ်မှာစိုးရင် သံပုရာသီးစိတ်လေးကို ဆားလေးအနည်းငယ်နဲ့တို့စားပါ။ အမူးနည်းနည်းတော့ သက်သာစေမှာပါ။ ပိုမွှားတွေကို သန့်စင်ပါ သံပုရာသီးမှာ အက်စစ်ဓာတ်တော်တော်များများပါဝင်တာကြောင့် ပိုးမွှားတွေကို သေစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်က ဘေးစင်တွေ၊ မီးဖိုချောင်တွေနဲ့ တခြားနေရာတွေမှာ သံပုရာသီးအရည်လေးဖြန်းခြင်းဖြင့် ပိုမွှားတွေရန်က ကာကွယ်နိုင်မှာပါ။ သွေးကျဆေး ဒါကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ သွေးတိုးတဲ့အခါ သံပုရာရည်ချဉ်ချဉ်လေး တစ်ခွက်က တော်တော်လည်း အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ ပြီးတော့ သွေးနည်းနည်းတိုးတတ်တဲ့လူတွေ တက်စာတွေဖြစ်တဲ့ ဒံပေါက်၊ ငံတဲ့ အစားအစာတွေ စားပြီးရင် သံပုရာရည်လေးတစ်ခွက်လောက် သောက်သင့်ပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့ရှင်းစေ ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူတွေ၊ အရက်သောက်တတ်သူတွေ၊ ကွမ်းစားတတ်သူတွေအတွက် သံပုရာသီးက ခံတွင်းမှာစွဲနေတဲ့ အနံ့တွေကိုလည်း ဖျောက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လက်သည်းဖြူဆေး ညစ်ပြီးသား သံပုရာသီး အခွံနဲ့ လက်သည်း၊ ခြေသည်းလေးတွေကို ပွတ်ပေးရင် ဖွေးသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လျှထားတာ၊ အနာဖြစ်နေတာတွေရှိရင်တော့ မပွတ်မိပါစေနဲ့ စပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဝက်ခြံတွေသက်သာစေဖို့ သံပုရာရည်ကို ပျားရည်၊ သကြားညိုအနည်းငယ်တို့နဲ့ ရောပြီး (၃၀) မိနစ်ခန့် မျက်နှာပေါ်တင်ထားပါ။ ပြီးရင်တော့ ဆပ်ပြာနဲ့မဟုတ်ဘဲ ရေနဲ့ဒီတိုင်းဆေးပါ။ သံပုရာရည်က ဘတ်တီရီးယားပိုးတွေကို သေစေတာကြောင့် ဆားဝက်ခြံတွေ၊ ဝက်ခြံတွေကို သက်သာစေမှာပါ။ ...